Aya akanakisa mitsara yaGabriel Garcia Márquez mune Makore Mazana Ekusurukirwa | Zvazvino Zvinyorwa
Tsvaga pawebhu "zvirevo zvine mukurumbira naGabriel Garcia Márquez Makore Mazana Ekusurukirwa" zvakajairika. Uye iri nderekuti basa iri rakaisa toni, uye kunyangwe nanhasi, anopfuura makore makumi matanhatu mushure mekuburitswa kwayo, iri kuramba ichitaura nezvayo. Gabriel García Márquez ndiye pasina mubvunzo mumwe wevamiriri vane mukurumbira vehunyanzvi hwekuita zvemashiripiti uye zvinyorwa zveLatin America zvakajairika. Hazvishamisi kuti "Gabo" akapihwa mubairo weNobel weLitiso wa60. Neichi chikonzero, chinyorwa ichi chinopa sarudzo ine mitsara yakanakisa kubva Makore zana okusurukirwa (1967), hunyanzvi hwake.
Iyi nhoroondo inofungidzirwa nevadzidzi senge chinyorwa chekukosha kwepasirese. Zvakawedzera, bepanhau reIberia El Mundo akaisanganisira iyo mu "runyorwa rwezana zana rakanakisa enganonyorwa muSpanish yezana ramakore rechi100". Kune chikamu chayo, bepanhau reFrance Le Monde Anotaura nezvazvo pakati pe "zana rakanakisa mabhuku ezana ramakore rechi100." Saizvozvowo, yeNorway Book Club ndiyo imwe ye "zana zana mabhuku enguva dzese".
1.1 Kuberekwa, hudiki uye kudzidziswa pakudzidza
1.2 Maitiro uye mabasa ekutanga
1.3 Basa rake rezvenhau uye muchato
1.4 Mabhuku ekutsaurira
1.4.1 Nhaka Yemakore Huru Yemakore Ega
1.4.2 Mimwe yekuwedzera pamusoro peMazana Mazana emakore ega kuva wega
2 Aya akanakisa mitsara yeMamwe Makore Makore Ekusurukirwa
Kuberekwa, hudiki uye kudzidziswa pakudzidza
Gabriel Jose de la Concordia Garcia Marquez (Kurume 6, 1927 - Kubvumbi 17, 2014) akaberekerwa muAracataca, dhipatimendi reMagdalena, Colombia. Gabriel Eligio García aive vabereki vake, naLuisa Santiaga Márquez, amai vake. "Gabito" akasiyiwa ari kuchengetwa naambuya nasekuru vake amai kumusha kwake. Asi muna 1936 sekuru vake vakashaya uye ambuya vake vakapedzisira vave bofu, saka, akadzokera kuvabereki vake kuSucre.
Akaenda kumakore ake ekutanga kuchikoro chesekondari pachikoro chevaJesuit San José (nhasi, Instituto San José). Panguva iyoyo akatanga kubudisa nhetembo mumagazini iyi Vechidiki. Shure kwaizvozvo, rAkagamuchira kudzidza kwehurumende kunodzidza kuLiceo Nacional de Zipaquirá, padyo neBogotá. Ikoko akawana bachelor's degree rake uye akazotanga kudzidza zvemutemo paNational University yeColombia.
Maitiro uye mabasa ekutanga
Muzvokwadi, chikoro chemutemo chaisave sarudzo yemhizha asi panzvimbo pekuedza kufadza mubereki wake. Sezvo chishuwo chechokwadi chaGarcía Márquez chaive chekuve munyori. Zvakare, panguva iyoyo yakaratidzirwa zvikuru nevanyori vakadai saFranz Kafka naBorges.
Nenzira iyoyo, anga achigadzirisa musambo wakasanganisa nyaya dzekupenga dzaambuya vake nemaitiro echimiro akafuridzirwa Metamorphosis, Semuyenzaniso. Munguva yaGunyana 1947 akaburitsa yake pfupi pfupi nyaya Muoni. Zvichakadaro, akaenderera mberi nebasa rake remutemo kudzamara kwainzi kunonzi Bogotazo, kwakaitika muna Kubvumbi 9, 1948 mushure mekuurayiwa kwaJorge Eliécer Gaitán.
Basa rake rezvenhau uye muchato
Mushure mekuvharwa kusingaperi kweNational University, Márquez akaenda kuYunivhesiti yeCagagena uye akawana basa semutori wenhau mu El Universal. Muna 1950, akanyatso kusiya degree rake rezvemutemo kuti aite utapi venhau muBarranquilla. Muguta guru reDhipatimendi reAtlántico akaroora Mercedes Barcha munaKurume 1958.
Vaviri ava vaive nevana vaviri: Rodrigo (1959) naGonzalo (1964). Muna 1961, Gabriel García Márquez akatamira nemhuri yake kuNew York, kwaakashanda semunyori wenhau waPrensa Latina. Nekudaro, nekuda kwehukama hwepedyo nemishumo inofadza kune chimiro chaFidel Castro, akagamuchira kushoropodzwa kwakasimba kubva kune vanopokana neCuba.
García Márquez nemhuri yake vakatamira kuMexico City mushure mekutyisidzirwa neCIA. Munyika dzeAztec akasimbisa pekugara kwake uye akapedza hwakawanda hwese hupenyu hwake, kunyangwe aine dzimba muBogotá, Cartagena deIndias neParis.
En guta guru reMexico akaburitsa basa rake rekutsaurira munaJune 1967: Makore zana okusurukirwa.
Nhaka ye Makore zana okusurukirwa
Este bhuku yakave zita rakakurumbira mukati meLatin America mashiripiti nekutenda mukubatanidzwa kwayo kwehunyanzvi kwezvinhu zvinogoneka, ndima dzekunyepedzera uye zviitiko zvakawedzeredzwa kubva munhoroondo yeColombia. Nechikonzero ichi, pekutanga rakabudirira, rakazobvongodzwa uye rikazopedzisa guta reMacondo, rakazoita mukurumbira pasi rese.
Muchiitiko ichocho, García Márquez akaongorora misoro senge kusurukirwa, makunakuna, fungidziro, hondo, kutengeserana uye zvematongerwo enyika. Uye hapana kushomeka kwehunyengeri uye nenyaya dzerudo pakati pevamiriri venyaya inotenderera zvizvarwa zvinomwe zvinotsanangurwa munguva yekufamba. (Kunyangwe, mukati mekuzivikanwa kwenhoroondo).
Makore zana okusurukirwa ...
Zvimwe zvekuwedzera nezve Makore zana okusurukirwa
Yakatengesa hafu yemiriyoni emakopi mumakore ayo matatu ekutanga,
Yakashandurwa mumitauro makumi maviri neshanu.
Rinotorwa sebhuku rinotengwa zvakanyanya pasi rose rakaburitswa muchiSpanish
Aya akanakisa mitsara yeMamwe Makore Makore Ekusurukirwa
"Nyika yanga ichangopfuura zvekuti zvinhu zvizhinji zvainge zvisisina mazita, uye kuzvitaura waifanirwa kunongedzera munwe wako."
“Chinhu chakakosha kusarasa tsika. Nguva dzose achiziva kambasi, akaenderera mberi achitungamira varume vake akananga kuchamhembe kusingaonekwe, kudzamara vakwanisa kubva munzvimbo yakaroya.
«Akazopedzisira arasikirwa nehukama hwese nehondo. Chaimbove chiitiko chaicho, chishuwo chisingadzivisike chehudiki hwake, chakava kwaari chirevo chiri kure: chisina chinhu.
"Akabvunza kuti iguta ripi iri, uye vakamupindura nezita raakange asati ambonzwa, iro risina zvarinoreva, asi raive nezwi risinganzwisisike mukurota: Macondo.
"Kusurukirwa kwakasarudza ndangariro dzake, uye kwakapisa murwi unopera simba wemarara akaraswa neupenyu mumoyo make, uye akachenesa, akakudza nekusimudzira mamwe, akaipisisa."
“Pfuti yakapfurwa muchipfuva uye projectile yakabuda kumusana kwake isina kurova nzvimbo yakakosha. Chinhu chega chakasara pane zvese waive mugwagwa une zita rake muMacondo ”.
"Akazoburitsa mari yakaunganidzwa mumakore akareba ekushanda nesimba, akawana zvisungo nevatengi vake, ndokutanga kuwedzera imba."
"Aigara achiwana nzira yekumuramba nekuti kunyangwe aisakwanisa kumuda, aisakwanisa kurarama asina iye futi."
"Chaizvoizvo, aive asina hanya nerufu, asi hupenyu, ndosaka manzwiro aakawana pavakapa mutongo uyu aisave ekutya asi emufaro."
“Paizvozvo akararama. Akanga atenderera nyika ka makumi matanhatu neshanu, akanyoresa muchikwata chevafambisi vezvikepe vasina nyika ”.
"Vakavimbisa kumisikidza nzvimbo yekuberekesa mhuka dzinoyevedza, kwete kuzonakidzwa nekukunda izvo zvavasingazodi, asi kuva nechimwe chinhu chekuzvikanganisa pamaSvondo anonetesa erufu."
"Akanzwa kukanganikwa, kwete nekukanganwa kwemoyo, asi nekumwe kutsamwa uye kusingachinjiki kukanganwa kuti ainyatsoziva, nekuti iko kukanganwa kufa."
"Asi usakanganwa kuti chero Mwari vachitipa hupenyu, isu ticharamba tiri vanaamai, uye kunyangwe vakaita shanduko sei, tine mvumo yekudzikisa mabhurugwa avo nekuvapa ganda pakutanga kushaya rukudzo."
"Sezvinhu zvese zvakanaka zvakaitika kwavari muhupenyu hwavo hwakareba, iyo rombo risingadzoreke rakatangira mune mukana."
"Iye chete ndiye akaziva ipapo kuti moyo wake wakakatyamadzwa wakave nekusingaperi kusava nechokwadi."
"Aive nerunako runoshoma rwekusavapo zvachose asi panguva yakafanira."
“Nenguva diki akawana mavanga, maronda, mavanga, maronda uye mavanga akange asara paari kwehafu yezana ramakore ehupenyu hwezuva nezuva, akaona kuti kuparadza uku hakuna kumutsa maari kana tsitsi. Akazoedza kwekupedzisira kutsvaga moyo wake kuti awane nzvimbo yaive yaora moyo, uye haana kuiwana.
“Zarura meso ako. Nevamwe vavo, vana vachabuda nemuswe wenguruve ”.
"Nyika yakaderedzwa kusvika pamusoro peganda rake, uye zvemukati zvakachengetedzeka kubva mukuvava kwese."
"Kunonoka ndinozvishingisa kuti ndingadai ndakakuitira nyasha huru dai ndakurega uchipfurwa."
“Kwakanaya kwemakore mana, mwedzi gumi nerimwe nemazuva maviri. Pakange paine nguva dzekupfachukira apo munhu wese aipfeka hanzu dzechiponifia uye vogadzira kumeso kwakapora kupemberera scamp, asi vakakurumidza kujaira kududzira kumbomira seziviso yekudzokororazve.
"Aifanirwa kusimudzira makumi matatu nemaviri ehondo, uye nekutyora nhanho dzake dzese nekufa uye kuumburuka senguruve mudunduru rekubwinya, kuti awane makore angangosvika makumi mana anonoka runyararo rwekureruka."
"Nguva yekupedzisira pavakamubatsira kuverenga zera rake, mumazuva ekambani yebhanana, aive akaverenga pakati pemakore zana negumi neshanu nezana nemakumi maviri nemaviri ezera."
"Hapana munhu anofanira kuziva zvarinoreva kusvikira vasvitsa makore zana."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Akakurumbira makotesheni naGabriel Garcia Márquez mune Makore Mazana Ekusurukirwa
Sixto Rodriguez Hernandez akadaro
Mamwe emitsara yakasarudzwa ndeye runako runoshamisa. Vamwe vane hyperbolic uye vamwe vakazara nehunyanzvi kana kuseka kana zvese zviri zviviri.
Pindura kuna Sixto Rodríguez Hernández
Mabasa makuru aJuan Ramón Jiménez